Kugamuchirwa ku47 CIFF
Yakatangwa muna 1998 ine 384 varatidziri, nzvimbo yekuratidzira yemakumi mashanu emamirimita mita uye kupinda kwevanopfuura vatengi zviuru makumi maviri, CIFF, China International Furniture Fair (Guangzhou / Shanghai) yakachengetedzwa zvinobudirira kwemasangano makumi mashanu nemashanu uye inogadzira yepasirose inonyanya kuda kutengeserana. platfo ...
Mhedzisiro yekufambisa kwehotera uye kusimudzira kwekushanya pane yekunze fanicha indasitiri
Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwehupenyu hwehupenyu, vanhu vazhinji uye vazhinji vanogadzirira dzakasiyana dzakasiyana dzinoshanda nzira dzekufamba kana vaine nguva uye simba remari. Zvinonyanya kufarirwa nevashanyi ndevaya vanogona kushanyirwa zvisinei nemwaka. Iyo boom pasina mubvunzo yakatungamira mukuvandudza ...
Nezve Kunze Fenicha uye Zvinhu
Sei tichifanira kutenga midziyo yekunze kana tichironga nzvimbo yekunze? Imhaka yekuti mukuwedzera kune dhizaini yekunze fanicha, inofanirwa kusangana nezvinodiwa zvehupenyu hwekunze, uye iyo yekunze nharaunda yakanyanya kushata kupfuura yemukati, saka izvo zvemukati zvekunze fanicha inofanirwa Special mvura -...